Haweenka Leh Tilmaamahaan Waa Riyada Nin Kasta - Aayaha
Waxaa jiraa tilmaamo loo baahanyahay in haweeney kasta ay yeelato, waana waxyaabaha loo baahanyahay in nin kasta uu ka eego haweeneyda
Haweeneyda degan, waxaad la yeelaneysaa xiriir degan, haweeneyda degan ma muran badna mana dagaal badna mana qeylo badna,muran iyo buuq ayaa hareeyay xiriiro iyo guur badan, haweeneyda degan ee nabadda ah waxay leedahay dabci xasilooni ah iyo xiriir nabad ku dhisan.
Dabcan, waa inaad noqotaa qof uu nin aamini karo, beenta iyo qiyaanada waa inaysan noqon dabeecadaada, haweeneyda aaminka kalsooni ayay siisaa ninkeeda.
Xushmadda waa wax muhiim ah oo intabadan ay xiriirada la la’yihiin muddooyinkaan, waana mid aad ugu ah haweeneyda inay xushmeyso ninkeeda, sided ku dhihi kartaa waaku jeclahay adigoo aanan xushmeyn?
Haweeneyda naxariista badan waa haweeney qurux badan, naxariista waa wax qaali ah oo dhinac walba muhiim kuugu ah, haweeneyda naxariista badan waa haweeney qurux badan shaki kama taagna waxana jecel qof kasta.
Jacaylkaaga waa inuusan ku ekaan lamaankaaga iyo qoyska, jeclaaw nolosha, jeclaaw qoyskaaga iskuna day inaad wanaag sameysid, haweeneyda jecel dadkaan ayaa jeclaan doonta ninkeeda si qof kale uusan waligeed u jeclaan.
Haweeney aan danteeda kaliya ka fekerin
Haweeneyda noocaan ah nafteeda iyo danteeda kaliya kama fekerto; ma rabto wax kasta inay iyada kaliya qabsato, haweeneyda aanan danteeda kaliya ka fekerin waa qof lagu tiirsanaan karo waana tan soo saarta wanaagga ninkeeda.
6 tayood waxay haweeney kasta ka dhigayaan mid dahab ka qiimo badan oo qurux iyo soo jiidasho leh waana muhiim tayooyinkan in nin kasta uu ka eego haweeneyda.
14 Waxyaabood oo qiimo leh oo xaaskaaga ay kaa istaahisho inaad u sameysid (Haddii aad jeceshahay u sameey)
4 Siyaabood Oo Lagu Helo Ninka Riyadaada Ah